/ Products / Hormone fampihorohoroana
Ny estrogen, ny progesterone, ary ny testosterone dia mihena ny fihenan'ny taona, indrindra mandritra sy aorian'ny taona. Fantaro ny fomba hitazonana ny firaisana ara-nofo eo aminao, na dia mihena aza ny haben'ny hormoneo. Ary, ho an'ny lehilahy sasany, miaraka amin'ny taonany, dia mihena ny resaka firaisana ara-nofo. Ary, indrindra fa ny lehilahy sasany dia manana olana mahomby amin'ny erectile. Ampiasao mba hanandrana ny fiainana, na ny fiainam-pianakaviana tsaratsara kokoa, ny fampiasana fanafody manatsara ny firaisana.
Tsy voatery ho antony tokony hiadian-kevitra ny fametrahana olana tsy tapaka. Raha toa ka misy olana tsy mitongilana ny dysfunile, dia mety miteraka adin-tsaina, manimba ny fahatokisan-tena ary manampy amin'ny fifandraisana amin'ny fifandraisana. Ny olana na ny fitazonana ny fananganana dia mety ho marika ihany koa amin'ny toe-pahasalamana iray izay mila fitsaboana ary mety ho tratran'ny aretim-po.
Ireo fanafody antsoina hoe "nitrates" izay matetika no soratana ho an'ny fanaintainana tratra
Maneho 1-8 ny 12 vokatra